शाकाहारीका लागि चेतावनी ! बोटबिरुवालाई आफैं खाइएको थाहा हुन्छ (भिडियोसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
शाकाहारीका लागि चेतावनी ! बोटबिरुवालाई आफैं खाइएको थाहा हुन्छ (भिडियोसहित)
जेठ ११ गते, २०७२ - १८:२३
के तपाईंले जनावरको भावनालाई सम्मान गर्दै मासु खान छोड्नभएको छ ? हामीमध्ये धेरैलाई शाकाहारी हुनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक भएको थाहा छ । तर धेरैले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्दा पनि जनावरलाई मार्ने बेलामा उनीहरुको क्रन्दन सुन्दा र उनीहरुको माया लागेर मासु खान छोडेर सागपात खान जोड गर्दछन् । तर यहाँ शाकाहारीका लागि नराम्रो खबर छ । युनिभर्सिटी अफ मिसौलीले गरेको एक अनुसन्धानमा बोटबिरुवालाई आफू खाइएको कुराको जानकारी हुन्छ ।
अनुसन्धानकर्ताले क्याटरपिलरले कुनै बोट खाइरहेको बेला निकाल्ने कम्पन र ध्वनीलाई रेकर्ड गरि पछि त्यो अर्को बोटमा लगेर सुनाइयो । त्यसको केहि घण्टा पछि उक्त बोटले क्याटरपिलरले सहन गर्न नसक्ने तोरीको तेल रिलिज गर्यो । तर त्यहि बोटले भने हावाको ध्वनीप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् जबकी हावाबाट पनि त्यस्तै प्रकारको ध्वनी प्रभाव पैदा हुने गर्दछ ।
अनुसन्धानमा संलग्न वरिष्ठ वैज्ञानिक हेडी एपेलले उक्त निष्कर्षले कृषिमा भिन्न तरिका अपनाउन सकिने बताएका छन् ।
यद्यपी, जिवित बोटबिरुवाले मात्र यस्तो प्रतिक्रिया दिन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष छ । उक्त अनुसन्धानमा मानिसहरुले बाली भित्र्याउँदा पनि बोटबिरुवालाई थाहा हुने बताइएको छ । यसको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिइएको भिडियो हेर्नुहोस्ः
जेठ ११ गते, २०७२ - १८:२३ मा प्रकाशित